Une (Zvichakadaro) Une Tsamba: Nei Artificial Intelligence Zvichireva Remangwana Rakasimba rekushambadzira Maemail | Martech Zone
Zvakaoma kutenda kuti email yave iripo kwemakore makumi mana nemashanu. Vazhinji vatengesi nhasi havana kumbogara munyika isina email.
Asi kunyangwe hazvo yakarukwa mumachira ehupenyu hwezuva nezuva uye bhizinesi kune vazhinji vedu kwenguva yakareba, ruzivo rwevashandisi veemail rwakashanduka zvishoma kubva pakatumirwa meseji yekutanga mukati 1971.
Chokwadi, isu tava kukwanisa kuwana email pane mamwe madhijitari, zvakanyanya chero nguva chero kupi, asi maitiro ekutanga haana kuchinja. Iye anotumira anoridza kutumira panguva yekumanikidza, meseji inoenda kuinbox uye inomirira iye anogamuchira kuti avhure, tarisiro asati aidzima.
Nguva nenguva kuburikidza nemakore, mapundits akafanotaura nezvekutsakatika kweemail, kuchitsiviwa neatsva uye anotonhorera mameseji maapplication. Asi saMark Twain, mishumo yekufa kweemail yakawedzeredzwa zvakanyanya. Inoramba iri yakakosha uye inowanzo shandiswa tambo yekutaurirana pakati pemabhizimusi nevatengi - haisisiri iyo yega, zvirokwazvo, asi chikamu chakakomba chemusanganiswa.
Zvichida 100 mabhiriyoni emaimeri anotumirwa zuva rega rega, uye huwandu hweamabhizinesi emaimendi maakaunzi anotarisirwa kukura kusvika 4.9 bhiriyoni pakupera kwegore rino. Email inoramba ichinyanya kufarirwa muB2B, sezvo ichibvumira kureba uye kudzama kutaurirana kana ichienzaniswa nesocial media uye dzimwe nzira dzekutumira mameseji. Muchokwadi, vatengesi veB2B vanoti kushambadzira kweemail ndiko 40 nguva inoshanda zvakanyanya kupfuura vezvenhau mukugadzira zvinotungamira
Kwete chete kuti email haisi kuenda chero nguva munguva pfupi iri kutevera, asi ramangwana rinotaridzika kupenya, nekuda kwehunyanzvi hwekugadzira hunyanzvi hwakagadzirira kusimudzira chiitiko cheemail. Nekuongorora maitiro evanogamuchira maitiro mukuvhura, kudzima uye kuita pamaemail, AI inogona kubatsira vashambadziri kugadzirisa avo eemail kusvika kune vatengi 'uye tarisiro' akasarudzika zvavanofarira.
Kusvika parizvino, yakawanda yekushambadzira hunyanzvi hwakakomberedza email yakanangana nezviri mukati. Pane indasitiri yese yakatsaurirwa kubatsira kugadzira yakanyanya kukodzera email meseji kukumbira mhinduro uye chiito. Zvimwe zvekuvandudza zvakanangisa pane zvinyorwa. Sourcing zvinyorwa. Kuwedzera zvinyorwa. Nyora hutsanana.
Zvese izvo zvakakosha, asi kunzwisisa nguva uye nei vanogamuchira vanovhura maemail kwakaramba kuri chakavanzika - uye chakakosha kugadzirisa. Tumira zvakawandisa, uye unoisa panjodzi kunetsa vatengi. Usatume zvakakwana zvemhando chaiyo yeemail - panguva chaiyo - uye unoisa panjodzi yekurasikirwa mukuwedzera kwakazara vanhu kurwisa inbox zvivakwa.
Nepo vatengesi vakatora nhamburiko yekuedza kuita zvemukati zvemukati, kutariswa kwekugadzirisa nzira yekuendesa kwave kushoma. Kusvika parizvino, vatengesi vane nguva yakatarwa yekuparadzirwa kweemail kuburikidza neyakajeka kana humbowo husina kujeka hwakaunganidzwa kubva kumapoka makuru uye kuongororwa nemaoko. Pamusoro pekushambadzira kana maemail angangoverengerwa, iyi yekumashure-kwe-iyo-napkin ongororo haigadzirise chaizvo kana vanhu vangoda kupindura nekutora matanho.
Kuti vakunde, vatengesi vachawedzera kudikanwa kuti vagadzire kuendeswa kwemameseji-akavakirwa ekutengesa mameseji sekungogadzira kwavakaita iwo mameseji. Kutenda kufambira mberi muAI uye kudzidza kwemuchina, iyi mhando yekuendesa kuita kwako iri kuitika.
Iyo tekinoroji iri kubuda kubatsira vashambadzi kufanotaura yakanakisa nguva yekutumira meseji. Semuenzaniso, masisitimu anogona kudzidza kuti Sean anowanzo nyore kuverenga nekutora matanho kumaemail matsva na5: 45 PM achiri muchitima chevashandi kuenda kumba. Trey kune rimwe divi anowanzo verenga email yake asati arara na11 PM asi haatore matanho kusvikira agara padhesiki rake mangwanani anotevera.
Mashini ekufunda masisitimu anokwanisa kuona eemail optimizations mapatani, ovarangarira uye nekugadzirisa mashedhiyo ekuendesa mameseji kumusoro kwebhokisi rebhokisi panguva yakakwana yekubatana hwindo.
Sevashambadziri, isu tinokoshesawo kuti tarisiro ine runyorwa rwuri kukura rweanofarira nzira dzekutaurirana. Meseji. Zvemagariro midhiya mapuratifomu. Push notices kune nharembozha.
Munguva pfupi, michina yekufunda masisitimu akagadziriswa eemail ekuendesa zvaunofarira anogona kudzidza nzira dzakasarudzika dzekuendesa mameseji. Izvo zvirimo zvirimo, zvinounzwa panguva chaiyo, kuburikidza nenguva-yakatarwa chiteshi yakasarudzika.
Kukurukurirana kwese kwauinako nevatengi kunokosha. Kukurukurirana kwese kwauinako nevatengi mukana wekupinza mhinduro inowedzera rwendo rwavo rwekutenga munzira itsva dzakasiyana. Wese munhu ane akasiyana ekutenga mapatani.
Pachivanhu, vatengesi vakapedza maawa asingagumi kuyedza mepu mitsetse yekutenga nzendo dzemapoka akakura evatengi uye ndokuzodurura samende pamusoro peichi chiitiko. Masystem haana nzira yekugadzirisa shanduko isingadzivisike mukutenga kwemunhu uye haakwanise kuita chero shanduko yezvakatipoteredza.
Iine email inotarisirwa kuramba iri hukama hwakakosha pakati pemakambani nevatengi, basa reAI pakudzidzisa imbwa yemakore makumi mana nemashanu maitiro matsva ibudiriro inogamuchirwa. Kushambadzira otomatiki masisitimu anofanirwa izvozvi funga nezve wese mutengi, chidimbu chega chega chemukati, uye unowirirana navo munguva chaiyo yekusangana nezvinangwa zvebhizinesi. Yakapusa email kuendesa inoda kuve chikamu chakakosha cheizvozvo.
Tags: Chiito-Onaichakagadzirwa njereb2bkutenga rwendoEmail Marketingmutungamiri wechizvarwamachine learningemail yekutengesa
Michelle akadaro Ita-Pane Software'' Chief Marketing Officer, uye anotarisira iyo kambani kambani, kudiwa, uye vatengi kuwedzera kushambadzira kwekushambadzira. Michelle anouya kuAct-On aine makore 17+ 'achibatsira makambani anotungamira emusika, anosanganisira Salesforce neOracle, batanidza vatengi nehunyanzvi hwekugadzirisa bhizinesi ravo. Chazhinji munguva pfupi yapfuura, Michelle aive GM weSalesforce's Data.com chikamu mushure mekushandira seVP yeKushambadzira yeboka. Asati agara paSalesforce, Michelle aive Senior Director kuOracle uye Senior Product Marketing Manager kuStellent (yakawanikwa naOracle).